Nidaamyada iyo talo-siinta xilliga safmarka cudurka [Covid-19] ee ka hirgaleen Gobolka Skåne
Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa qodobada nidaamyada iyo talo-siinta ee xiriirka la leh fayruuska [Corona] iyo cudurka [Covid-19] kuwaasoo ka hirgaleen Gobolka Skåne.
Gurigaaga iska joog haddii aad xannuunsan tahay
Ma xannunsan tahay? Xaaladdaas waa inaad gurigaaga iska joogto, si qof kale aad cudurka u qaadsin awgeed. Sidoo kale, guriga iska joog xitaa haddii inyar oo caafimaad-darro dareemayso.
Calaamadaha cudurka [Covid-19] waxaa ka mid ah qandho, qufac iyo dhuun-xannuun. Laakin dadyowga badidooda hab halis ah uguma xannuunsadaan mana u baahna in ay booqdaan xarumaha daryeel-caafimaadeedka.
Warbixin ku saabsan cudurka [Covid-19] oo ku qoran luqado kala duwan
Booqo barta internetka ee Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten]. Halkaas waxaad tusaale ka aqrisan kartaa naseexooyin xiriir la leh sida looga badbaado in cudurka lagu qaadsiiyo ama adiga aad qof kale qaadsiiso. Naseexooyinka luqado badan ayay ku qoran yihiin.
Warbixin barta internetka ee Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten] oo ku saabsan cudurka [Covid-19] oo ku qoran luqado kala duwan